Jabra Elite 85t, iri pamusoro weiyo odhiyo mhando uye kudzima ruzha | Gadget Nhau
Jabra Elite 85t, pamusoro peyemhando yemhando uye kudzimiswa kweruzha
Miguel Hernandez | 04/07/2021 11:52 | Vatauri, General, Mufananidzo uye kurira, Reviews
Jabra ikodhi yekuerera yakange ichitiperekedza nezvigadzirwa kune zvese zvinodiwa kwenguva yakareba, tinokurudzira kuti utarise kune edu apfuura ongororo kuti uwane zano. Ino nguva tichaenda kunosangana nechimwe che "premium" zvigadzirwa zvezvose zvakagadzirwa naJabra kusvika zvino.
Iyo Jabra Elite 85t mahedhifoni anomira kune Apple uye Sony dzimwe nzira pasina kuomarara. Tsvaga nesu idzi Jabra Elite 85t mune ino yakadzika kuongorora kweyekuteerera kwavo mhando uye ruzha kukanzurwa, urikupotsa here? Zvirokwazvo kwete.
1 Dhizaini uye zvigadzirwa: Sense inopfuura aesthetics
2 Kubatana uye kunyorera
3 Hunhu hwemazwi
4 Ruzha kukanzura uye kuzvitonga
Dhizaini uye zvigadzirwa: Sense inopfuura aesthetics
Jabra, kunyangwe akamira kunze nekuda kwesimba uye mhando yegungano rezvigadzirwa zvaro, hazvisi izvo kuti zvagara zvichizivikanwa neakanyanya aesthetic dhizaini. Hunhu uhu hunoratidzwa zvakare muJabra Elite 85t, mahedhifoni ari kure nekuve anonyanya kunakisa pamusika. Kazhinji iwo akakura uye akafuta, uye haamire pakuve akareruka. Mune ino kesi, isu takaedza iyo edition iyo inosanganisa matema uye emhangura matoni mune akakosha madhata. Nekudaro, zvese zvinoyerwa paJabra.
Mahedhifoni: 23,2 x 18,6 x 16,2mm
Mhosva: 64,8 x 41 x 28,2 mm
Mahedhifoni: 6,9 gramu imwe neimwe
Mhosva: 43,7 gramu imwe neimwe
Dhizaini yayo yakagadzirirwa kukwana munzeve medu uye kuzorora pairi. Pakati pese, ivo vakasununguka kune vashandisi avo vasing "rambe" ma-nzeve mahedhifoni. Nekudaro, ndinofanira kureurura kuti handisi kugadzikana kwete neaya mahedhifoni kunyanya, asi vese vari mune iyi fomati, izvo zvisiri kuzokanganisa ongororo yedu futi. Nenzira iyi, muchidimbu, tinosvika pamhedziso yekuti idzi Jabra Elite 85t hadzisi chaiyo mahedhifoni anozovhenekera dhizaini yavo inoshamisa, asi nehunhu hwavo hwekuvaka uye ergonomics.
Kubatana uye kunyorera
Izvi Jabra Elite 85t Iva neBluetooth 5.0 yekubatanidza, izvo zvichatibatsira kugadzira otomatiki waya ekubatanidza nekukasira kana isu tavaburitsa kunze kwenyaya. Muchikamu chino, mashandiro acho ndiwo anogona kutarisirwa kubva kufemu. Tine hutachiwana codec SBC yemimhanzi mu "universalized" fomati uye isu tinoenderera mberi ku AAC Apple ndeyedu patinoshandisa Mac, iPhone kana iPad. Saizvozvo, mahedhifoni anowirirana zvakanyanya nemhando dzese dzemidziyo.
App yeIOS> LINK
Android App> KUSVIRA
Iko kunyorera, kwatakamboedza mune kumwe kuongorora, inguva yekuwedzera. Via Jabra Inzwi +, inowanikwa kune ese iOS neApple, iwe unozokwanisa kugadzirisa akawanda parameter emahedhifoni ayo anozoita kuti ruzivo rwako ruwedzere. Ichi chishandiso ishamwari yakakwana iyo ichatibvumidza isu kugadzirisa mashanu anoshanda mazinga eruzha kudzima, pamwe neiyo InzwaTrhoug Kuti udzikise ruzha rwemhepo, sarudza mubatsiri wezwi, mukana wekutsvaga mahedhifoni uye pamusoro pezvose zviripo zviripo pane App (muvhidhiyo yedu unogona kuzviona zvichiitika).
ari Jabra Elite 85t Ivo ibasa rakanyatsoitwa zvakanaka maererano neEchokwadi Wireless (TWS) mahedhifoni, kwatinoona kusimuka kwechokwadi, kwete kudaro mukuwongorora kwedu. Iyo inogara padanho rakaenzana sevamwe vayo vese vanokwikwidza mumusika kana zvasvika pamutengo renji, hongu, izvo ndizvo zvidiki zvinogona kutarisirwa.
Pakati nepakati: Isu tinowana chinomiririra chakanaka cherudzi urwu rwekuwanda, nekwaniso yekuchinjanisa pakati padzo, simba uye pamusoro pekuvimbika kwese maererano neruzha rwunoburitswa. Izwi revaimbi mumiyedzo yedu neArtic Monkeys naQueen rakanyatso kuburitswa.
Pasi: Mune ino kesi, Jabra anogona kunge anga akanyanyisa "kushambadzira" nekupa zvinoshamisa zvakasimbiswa mabass, ichokwadi kuti ivo vanonyanya kunakidzwa mune imwe iriko mimhanzi yekutengesa, asi ivo vanoenda zvakanyanya kuenda mune zvemukati patinoshandura kudombo.
Chero zvazviri, iyi poindi yakataurwa yakaipa yemabass akawedzeredzwa inogona kukurirwa nekugadzirisa kune iyo kusaenzana yekushandisa. Izvo zvinoshayikwa pamwe kuti vanga vasarudza odhiyo chimwe chinhu "chinoda" ne aptX codec.
Kana iri yekufona, Aya mahedhifoni akaratidzira kusimudzira kwakanaka kwekupindirana, takaona kuti hatisi kungonzwa zvakanaka chete, asi tinotinzwawo zvakajeka, kunyangwe mamiriro emhepo uye neruzha rwekunze rwunogadziriswa zvakanakisa.
Ruzha kukanzura uye kuzvitonga
Panyaya yekudzima ruzha, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti ini ndakachiwana chakanakisa uye pamwe tinogona kuchiisa pakati pedzakanakisa shanu dzese kudzimiswa kweruzha rweZvirina waya zvishandiso. InzwaThrough maitiro Iyo inosangana nezvinodiwa, kunyange chiri chokwadi kuti haisvike padanho revakwikwidzi neAirPods Pro-dhizaini "pachena" maitiro, asi inoigadzirisa nenzira inoshamisa. Zvekushandisa zvenguva dzose, kudzima kwaro ruzha kunopfuura zvakakwana uye kunozadzisa zvirinani izvo zvinovimbisa.
Iine Qi isina waya kuchaja
Nezve kuzvimiririra, iyo yakasimba inotipikira kupfuura maawa mashanu emimhanzi yekutamba Kuenderera mberi kuitira kuti tigare nekukanzura ruzha nguva dzose. Nekudaro, kuzvimiririra kunotsanangurwa nezvakawanda kupfuura izvozvo, iro vhoriyamu ratiri kuburitsa zvirimo richaita kuti bhatiri iri risiyane, uye chokwadi ndechekuti mukuyedzwa kwedu takawana iwo maawa mashanu anovimbiswa naJabra. Kuti tivabhadharise zvizere, isu tinoda angangoita maviri kana isu tikangobhadharisa mahedhifoni kuburikidza nenyaya yacho, uku tichichaja zvese zvishandiso zvinotora ingangoita makumi mana maminetsi. Muchidimbu chakasarudzika chekuzvitonga iyo Jabra 85t chigadzirwa chinopfuura zvakakwana.
Aya Jabra Elite 85t aunogona kutenga paAmazon kubva ku229 euros Icho chigadzirwa chepamusoro-soro chinotarisisa kumakwikwi. Ivo vanonunura izvo zvavanovimbisa, pasina kupokana, asi ivo vachiri kushomeka kwekuwedzera kwekuve kunyanya kugadzirwa kwechigadzirwa, izvo zvinogona kuita kuti vamwe vashandisi vafungisise kutenga kwavo. Mutengo wakakwira, asi kune rimwe divi, mhando yemutinhimira yakanyanya kunaka, pamwe nekudzima kweruzha.
Yakatumirwa pa: 4 de julio de 2021
Kugadziridza kwekupedzisira: 4 de julio de 2021
Inoshamisa yemhando yepamusoro odhiyo
Imwe yeakanakisa ANC pamusika
Dhizaina yakadzika dhizaini
Ndasuwa rumwe rutsigiro
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Jabra Elite 85t, pamusoro peyemhando yemhando uye kudzimiswa kweruzha
Famba wakadzikama zhizha rino nemotokari neiyi dashcam / yekumashure yekutarisa girazi
Realme TechLife Robhoti Vharuvhu, irobhoti inovhenesa yakanakisa yemhando yepamusoro / mutengo